Tamin’izay indrindra no nilaza ny anabaviny fa niezaka nitady azy ny ray aman-dreniny. Tokony nirava tamin’ny 5 ora hariva i Fanojo ary nanao baskety no nahitan’ny namany azy farany. Nambaran’ity anabaviny ity fa tsy fanaony mihitsy ny tsy mody. Omaly alarobia maraina, rehefa niampita ny hafatra fitadiavana, dia fantatra fa hita soa aman-tsara i Fanojo. Teny Andranovelona Mahitsy, raha ny vaovao azo hatrany, no nahitana azy. Nambaran’ny fianakaviany moa fa tsy hay hoe : ahoana no nahatongavan’ity ankizilahikely ity tany. Salama tsara i Fanojo ary nalain’ny ray aman-dreniny tany omaly ihany. Be dia be ny filazana zaza very amin’izao fotoana izao, na mbola kely izany na hatramin’ny lehibe. Mila mailo ny ray aman-dreny ny amin’ny zanany.